ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBemba IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiLuvale IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwahili (SaseCongo) IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
SIVELAPHI isihlabathi? Miningi imithombo esivela kuyo. Kodwa lona okuzoxoxwa ngawo kulesi sihloko kungenzeka ukumangaze. Inhlanzi egaya amakhorali abe isihlabathi esicolisekile—ebizwa ngokuthi i-parrot!
Le nhlanzi ihlala emanzini asezindaweni ezifudumele ezihlukahlukene emhlabeni. Ngemva kokugwinya amakhorali agayekile, umzimba uthatha ukudla okuncane okukuwo bese ukhipha izinsalela seziyisihlabathi. Ukuze yenze lo msebenzi, isebenzisa imihlathi yayo enamandla emise okoqhwaku namazinyo aqinile angemuva. Ezinye izinhlobo zayo zingahlala iminyaka engaba ngu-20 zisenamazinyo aphelele.
Kwezinye izindawo, ngokuhlafuna kwayo amakhorali afile, le nhlanzi ikhiqiza isihlabathi esiningi kunezinye izinqubo ezingokwemvelo. Abanye abacwaningi balinganisela ukuthi le nhlanzi ikhiqiza amakhulu amakhilogremu esihlabathi ngonyaka.
Uhlobo lwenhlanzi okuthiwa i-Swarthy parrot
Le nhlanzi yenza nomunye umsebenzi obalulekile. Njengoba idla amakhorali afile anolwelwesi oluluhlaza nezitshalo, igcina amakhorali ehlanzekile. Ngokudla kwale nhlanzi lezi zinto, igcina izixhobo zamakhorali zisesimweni esihle. Lapho lezi zinhlanzi nezinye izilwane ezidla uhlaza zingekho, kusheshe kugcwale ulwelwesi oluluhlaza nokhula lwasolwandle. Incwadi ethi Reef Life ithi, “Abanye bathi izixhobo zamakhorali bezingeke zibe yilokhu eziyikho manje ngaphandle kwezilwane ezidla uhlaza.”
Wonke lo msebenzi eziwenza phakathi nosuku, udinga ukulala ngokwanele, nakulokhu lezi zinhlanzi zihlukile. Izixhobo ziyindawo engaphephile ebusuku ngenxa yokuthi abazingeli basuke behambahamba. Lezi zinhlanzi zivame ukucasha ngaphansi kwamadwala, kodwa le ndawo ayiphephile ngokwanele ukuba izivikele koshaka abalambile.
Ukuze zizivikele ngokwengeziwe, ezinye zalezi zinhlanzi ziyazisonga uma sezilala. Zikhiqiza uketshezi olushubile olumboza umzimba wonke olubukeka njengengubo yokulala ekhanya ngale. Ososayensi bezasolwandle bakholelwa ukuthi le ngubo enuka kabi ivikela lezi zinhlanzi ezilwaneni ezizizingelayo.
Inhlanzi i-parrot ingenye yezinhlazi ezibonakala kalula futhi ezithandekayo ezihlala ezixhotsheni zamakhorali. Imibala yayo egqamile iyashintshashintsha njengoba ikhula kungakhathaliseki ukuthi eyeduna noma eyensikazi. Kodwa okuhle nakakhulu ukuthi ezindaweni lapho zingadotshwa khona kakhulu, azibesabi abantu. Ngakho ziphakathi kwezinhlanzi okulula ukuzibona.
Bambalwa abantu abayoke bakhohlwe umuzwa ababa nawo lapho besondela kule nhlanzi, beyibuka futhi beyizwa ihlafuna amakhorali. Njengoba lezi zinhlanzi zibukisa ngemibalabala yazo emihle, zigcina imvelo ihlanzekile ukuze ezinye izilwane ezihlala ngaphansi kwamanzi nabantu bayijabulele.
AMAQINISO NGENHLANZI I-PARROT
Izinhlanzi okuthiwa ama-parrot (ososayensi abazazi ngokuthi i-Scaridae) ziwumkhaya omkhulu onezinhlobo ezingu-80 ezivame ukutholakala ezixhotsheni zamakhorali emanzini asezindaweni ezifudumele. Igama lazo lisuselwa emlonyeni wazo ophawuleka kalula ofana noqhwaku lukapholi. Ubude balezi zinhlanzi buphakathi kwamasentimitha angu-50 kuya kwayikhulu.
Thumelela Thumelela Inhlanzi Okuthiwa I-Parrot—Ingabe Umshini Owenza Isihlabathi?